Linchpin: အစားထိုးမရတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ လုပ်ငန်းခွင်အနုပညာ (ဒုတိယပိုင်း)
26 Nov 2018 . 2:35 PM
Linchpin တွေဟာ ဘယ်လိုသဘောသဘာဝရှိကြောင်းနဲ့ သူတို့အလုပ်အပေါ်ထားရှိတဲ့ စရိုက်လက္ခဏာနဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားကို အပိုင်း (၁) မှာဖော်ပြပေးခဲ့ပါတယ်။ မဖတ်ရှုရသေးတဲ့ စာဖတ်ပရိသတ်များကို ဝင်ရောက်ဖတ်ကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းရင်း အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ အကျိုးရှိထိရောက်မှုအားကောင်းတဲ့ အများအားကိုးအားထားရာ Linchpin တစ်ယောက်ဖြစ်လာစေဖို့အတွက် အရေးပါပြီး သိသင့်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ချို့ကို ကောက်နှုတ်ပြီး အခုအပိုင်း (၂) မှာ ပြုစုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုရင် ဆက်လက်ဖတ်ရှုလိုက်ကြစို့ဗျာ။
ဒါတွေကတော့ Seth Godin ရဲ့ Linchpin ထဲက အဓိက ကောက်နုတ်ချက်တချို့ဖြစ်ပါတယ်။
စက်မှုတော်လှန်ရေးခေတ် မတိုင်မီက ပါရမီရင့်သန်တဲ့ ကျွမ်းကျင်သူတွေဟာ အရာများစွာကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်။ လက်ရာက သူမတူအောင် ထူးခြားလေလေ တန်ဖိုးကြီးမားလေဖြစ်ပါတယ်။
စက်မှုတော်လှန်ရေးကြောင့် အမျိုးအစားတူထုတ်ကုန်တွေကို မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ ဈေးသက်သက်သာသာ ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။
စက်ရုံတွေက အလုပ်သမားတွေကို ကမ်လှမ်းချက်တစ်ခု ပေးခဲ့တယ် – သူတို့ရဲ့ ကျွမ်းကျင်တဲ့ လုပ်ဆောင်ရည်တွေနဲ့ စိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေကို လောက်ငှပြေလည်စေလောက်မယ့် ပုံမှန်လုပ်ခငွေနဲ့ လဲလှယ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ စာသင်ကျောင်းတွေနဲ့ ကော်ပိုရေးရှင်းတွေကတော့ အများနဲ့မတူဘဲ တစ်မူထူးနေမယ့်အစား အများသူငါလိုဖြစ်ဖို့အတွက်ပဲ ဗဟိုပြုခဲ့ကြတယ်။ အမျိုးအစားတူတဲ့ ထုတ်ကုန်တွေကို ဈေးပေါပေါနဲ့ ခပ်မြန်မြန် ထုတ်လုပ်နေတဲ့ စက်ရုံတွေမှာ အမျိုးအစားတူရာလူတွေကို အလွယ်တကူ အစားထိုးနိုင်တဲ့ ခွေးသွားစိပ်တွေအဖြစ် လိုအပ်ခဲ့ကြတယ်။
အဲဒီလိုလုပ်ဆောင်မှုဟာ အချိန်တိုတိုအတွင်းမှာ အကျိုးဖြစ်ထွန်းခြင်းနဲ့ ထုတ်ကုန်စွမ်းအားရဲ့ အမြင့်ဆုံးကာလကို ရောက်ခဲ့တဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကအထိတော့ ကောင်းကောင်းအလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီနောက်မှာတော့ ဈေးသက်သာတဲ့ ထုတ်ကုန်တွေကို တရကြမ်းထုတ်လုပ်နေမှုက အလုပ်မဖြစ်တော့ပါဘူး။ ဒီလိုနဲ့ပဲ အလုပ်သမားတွေနဲ့ အပေးအယူက ပြိုပျက်သွားပါတော့တယ်။
အခုဆိုရင် စီးပွားရေးစနစ်က စနစ်ကြီးကိုယ်တိုင် ပြန်တီထွင်ရပါတော့မယ် (အလုပ်သမားတွေလည်း အပါအဝင်ပေါ့)။ ရှေ့ကိုတက်လှမ်းတဲ့အခါမှာ အောင်မြင်တဲ့သူတွေက “Linchpin”တွေ . . . အများသူငါလိုမဟုတ်ဘဲ ထူးခြားနေတဲ့သူတွေ ဖြစ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆီးနှင်းပွင့် တစ်ပွင့်နဲ့တစ်ပွင့် မတူကြသလိုပဲ လူနှစ်ယောက်ဟာလည်း မတူနိုင်ကြပါဘူး။ လူတစ်ယောက်ချင်းစီမှာ ကိုယ်စီကိုယ်ငှ ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်လုပ်နိုင်တဲ့ အရာတွေရှိပါတယ်။ အဲဒီအရာတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ “ပါရမီ”ပါပဲ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပါရမီနဲ့ အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်တဲ့ အရာကတော့ ပေးကမ်းပစ်ဖို့ပါပဲ။ ပြန်လည်ရယူလိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်မပါဘဲနဲ့ လက်ဆောင်ပေးကြတဲ့အခါမှာ လူလူချင်း ဆက်သွယ်မှုနဲ့ ပတ်သက်ဆက်ဆံမှုတွေကို ဖန်တီးပေးပါတယ်။
Linchpin တွေဟာ သူတို့ရဲ့ တမူထူးခြားတဲ့ အားသာချက်တွေကို အမြင့်မားဆုံးမှာ ထားရှိနိုင်ရုံမကဘဲ လူလူချင်း ဆက်သွယ်မှုကိုလည်း ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိသူတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ စိတ်ကူးစိတ်သန်းတစ်ခုကို အစပျိုးတတ်ကြသလို အလုပ်ကြိုးစားပြီး သူတို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းမှာ မရှိမဖြစ်တဲ့သူတွေဖြစ်လာအောင် လုပ်နိုင်ကြပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းမှာ အကြမ်းသုံးအပိုင်းတစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲဒါကို ဂေါ်ဒင် က ဖွတ်ဦးနှောက်လို့ ခေါ်ပါတယ်။ အဲဒီအပိုင်းဟာ ကျွန်တော်တို့ အသက်ရှင်သန်ဖို့ ပကတိအသိဉာဏ်နဲ့ အဓိကအားဖြင့် အကြောက်တရားကတဆင့် ကျွန်တော်တို့ကို အသက်ရှင်သန်နေစေတယ်။ ဖွတ်ဦးနှောက်ဟာ ကျွန်တော်တို့စိတ်ရဲ့ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့အပိုင်းတွေထက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်တစ်ခုအဖြစ် အခရာပိုကျနေပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပါရမီကို ကြားမြင်နိုင်ဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဖွတ်ဦးနှောက်က ပို့လွှတ်လိုက်တဲ့ အကြောက်တရားတွေကို ဥပေက္ခာပြုတတ်ဖို့လိုပါတယ်။ ဒါဟာ စက်မှုတော်လှန်ရေးအလွန် စီးပွားရေးစနစ်မှာ ကျွန်တော်တို့ကို အဖိုးတန်စေတဲ့ အရာပါပဲ။
အတိုချုံးပြောရရင် Linchpin ဟာ ကျွန်တော်တို့ကို အုတ်ရောရောကျောက်ရောရော ဖြစ်မနေဘဲ အများကြားက ထိုးထွက်နေဖို့အတွက် အားပေးထားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ သူမတူဘဲ ထူးခြားနေဖို့ ကိုယ့်ရဲ့အားသာချက်တွေကို အသုံးပြုရမှာဖြစ်တယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အများနဲ့မတူဘဲ ထူးခြားတဲ့လုပ်သားဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ကို စီးပွားရေးအကျပ်အတည်းဆိုက်ချိန်တွေမှာတောင် အလွယ်တကူ အစားထိုးမရနိုင်လို့ပါပဲ။
Linchpin တစ်ယောက်အဖြစ် ပြောင်းလဲလိုသူများအတွက် အိုင်ဒီယာကောင်း ငါးခု
၁. ကိုယ့်အတွက် ဘာပြန်ရမလဲဆိုတာ မမေးဘဲ ဘဝတွေကို ပြောင်းလဲပေးမယ့် လက်ဆောင်တွေကို ပေးဝေပါ။
၂. ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားနဲ့ ရက်ရောမှုက ဈေးကွက်တွေကို ပိုမိုကြီးမားစေပြီး အချိန်တိုတိုနဲ့ ပိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေတယ်။
၃. အကန့်အသတ်တွေမရှိတဲ့ အောင်မြင်မှုတွေကို ရှာဖွေပါ။
၄. ကြောက်စိတ်ကိုခံစားပြီး ကျော်လွှားလုပ်ဆောင်ပါ။
၅. ခြောက်ပြစ်ကင်းသဲလဲစင်ဆိုတာ အမွှမ်းတင်လွန်နေတဲ့အရာပါ။ ပြည့်စုံမှုဆိုတာ တကယ်မရှိတဲ့အကြောင်းကို Benjamin Franklin က ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးပြီ။
လူတွေဟာ စွန့်စွန့်စားစားမရှိဘဲ အများနဲ့ လိုက်လျောညီထွေ နေတတ်ကြတာကြောင့် ကျွန်တော်တို့ဟာ သူလိုကိုယ်လိုပဲ တိရစ္ဆာန်အုပ်တစ်အုပ်ရဲ့ စိတ်သဘောထားမျိုးနဲ့ နေထိုင်နေကြပါတယ်။
Linchpin ထဲမှာ ဆက်ဂေါ်ဒင်ဟာ အနုပညာသည်တွေဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကို သုံးစွဲထားပေမယ့် အနုပညာသည်ဆိုတာဟာ သူတို့ရဲ့အရင်းခံပါရမီတွေနဲ့ လူတွေကို ပြောင်းလဲပေးတဲ့သူလို့ ဆိုလိုရင်းဖြစ်ပါတယ်။
လူအများစုဟာ အများကြားထဲကနေ ထိုးထွက်မနေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဒီစာစောင်ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာ လူအတော်များများကို စိတ်မသက်မသာ ဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။ ဘာကြောင့်လဲ? ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အဲဒီလိုဖြစ်ဖို့အတွက် အင်မတန်ကြိုးစားရပြီး အင်မတန်အားစိုက်ထုတ်ရလို့ပါပဲ။ လူတော်တော်များများက ကိုယ်ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာကို အမြဲတမ်း ပြောဆိုခြင်းခံလာရတဲ့အတွက် သူတို့တွေအတွက် သက်သောင့်သက်သာရှိတဲ့ အခြေအနေမှာပဲ တွယ်ကပ်နေလိုကြပြီး လုပ်သင့်တာကို မလုပ်ကြပါဘူး။
ဟိုအရင်တုန်းကတော့ လူတွေဟာ ခိုင်းသမျှကို ရိုရိုကျိုးကျိုးနဲ့လုပ်ပြီး အလုပ်ကို အချိန်မှန်ရောက်မယ်၊ အလုပ်ကြိုးစားမယ်၊ ပြဿနာမရှာဘူးဆိုရင် သူတို့ရဲ့အလုပ်မှာ အောင်မြင်သွားကြပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီခေတ်ကြီးက ကုန်ခဲ့ပါပြီ။ ဒီနေ့ခေတ်မှာ အောင်မြင်ဖို့ဆိုရင်တော့ အများထက်ထူးခြားပြီး ရက်ရောဖို့၊ အရေးကြီးတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချတတ်ဖို့၊ အနုပညာကို ဖန်တီးတတ်ပြီး လူတွေနဲ့ အနုပညာကို ချိတ်ဆက်ပေးတတ်ဖို့ လိုအပ်လာပါပြီ။ ဒါတွေဟာ ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်ကြီးက ချမှတ်ပေးလိုက်တဲ့ အရာတွေပါပဲ။ လူတွေအနေနဲ့ လုပ်စရာရှိတာတွေကို ဦးစီးဦးဆောင်ပြုပြီး ဆောင်ရွက်မှဖြစ်တော့မယ့် ခေတ်ပါ။ အနုပညာသည်တစ်ယောက်အနေနဲ့ အနုပညာလက်ရာ များများပြုလုပ်လေ ပိုမိုလက်ရည်တက်လာလေပါပဲ။
ဒီတော့ Linchpin တစ်ယောက်ဖြစ်လာအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ?
အဲဒီအတွက် ရှင်းလင်းတဲ့လမ်းကြောင်း မရှိပါဘူး။ ဘယ်သူကမှ မွေးရာပါ Linchpin မဟုတ်ပါဘူး။ Linchpin တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက် သင့်အနေနဲ့ အရင်ဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပြီး အဲဒီနောက်မှ ဖြည်းဖြည်းချင်း လုပ်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။
၁. အဖွဲ့အစည်းရှိ ဝန်ထမ်းများကြားတွင် ထူးခြားသည့်ဘုံနယ်ပယ်တစ်ခု စီစဉ်ပြုလုပ်ခြင်း။
၂. သူမတူဘဲထူးခြားသည့် ဖန်တီးမှုစွမ်းရည် အသုံးပြုခြင်း။
၃. ရှုပ်ထွေးနက်နဲသည့် အခြေအနေတစ်ခု သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း။
၄. Customer များကို ဦးဆောင်ခြင်း။
၅. ဝန်ထမ်းများကို စိတ်အားထက်သန်မှုဖြစ်စေခြင်း။
၆. သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်အကြောင်း ဂဃနဏ သိရှိမှုရှိခြင်း။
၇. အများနှင့်မတူ ထူးခြားသည့်စွမ်းရည် ပိုင်ဆိုင်ခြင်း။
နှိမ့်ချမှုရှိတဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားက ပြဿနာတစ်ခုကို မောက်မာမှုနဲ့မဟုတ်ဘဲ ညင်သာမှုနဲ့ ချဉ်းကပ်နိုင်စေပါတယ်။
Linchpin တစ်ယောက်ဖြစ်လိုတယ်ဆိုရင် စတင်လို့ကောင်းတဲ့နေရာကတော့ အောက်ကမေးခွန်းငါးခုကို အမှန်အတိုင်းဖြေဆိုပြီး လက်တွေ့လုပ်ဖို့ပါပဲ။
ပထမအကြိမ်မှာတော့ အောင်မြင်ချင်မှ အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်။ စကားဝိုင်းက ဖြစ်ချင်မှဖြစ်လိမ့်မယ်။ ထုတ်ကုန်က ရောင်းရချင်မှ ရောင်းရလိမ့်မယ်။ သင့်အလုပ်ရှင်က ကျေနပ်ချင်မှ ကျေနပ်လိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့အနုပညာကို လူတွေမခံစားမိကြဘူး။ ဒါမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာ အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်တာကတော့ အနုပညာများများ ပိုဖန်တီးပြီး လက်ဆောင်များများ ပိုပေးဖို့ပါပဲ။ သင်ခန်းစာယူပြီး ရှေ့ဆက်ပါ။
အနုပညာသည်တစ်ယောက်အဖြစ်နဲ့ ပြည့်ပြည့်ဝဝ ရှင်သန်နိုင်အောင်ကြိုးစားပြီး ပုန်းအောင်းနေတဲ့ အရည်အသွေးတွေ ပေါ်ထွက်လာအောင် ပြုလုပ်ပါ။ ဘဝကို နောင်တကင်းမဲ့စွာ နေထိုင်ပါဆိုတဲ့ ဆက်ဂေါ်ဒင်ရဲ့သိမှတ်ဖွယ်ရာရေးသားချက်ကို အနှစ်ချူပ်ပြီး ပထမပိုင်းနဲ့ ဒုတိယပိုင်းအဖြစ် တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Linchpin တစ်ယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီနေ့ကစပြီး မိမိကိုယ်ကိုနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကို စတင်ပြောင်းလဲပါလို့ ပြောကြားရင်း ဆောင်းပါးကို အဆုံးသတ်လိုက်ရပါတယ်။
Ref: Seth Godin’s Linchpin
Linchpin: အစားထိုးမရတဲ့စှမျးဆောငျရညျနဲ့ လုပျငနျးခှငျအနုပညာ (ဒုတိယပိုငျး)
Linchpin တှဟော ဘယျလိုသဘောသဘာဝရှိကွောငျးနဲ့ သူတို့အလုပျအပျေါထားရှိတဲ့ စရိုကျလက်ခဏာနဲ့ စိတျနစေိတျထားကို အပိုငျး (၁) မှာဖျောပွပေးခဲ့ပါတယျ။ မဖတျရှုရသေးတဲ့ စာဖတျပရိသတျမြားကို ဝငျရောကျဖတျကွညျ့ဖို့ တိုကျတှနျးရငျး အလုပျလုပျတဲ့အခါ အကြိုးရှိထိရောကျမှုအားကောငျးတဲ့ အမြားအားကိုးအားထားရာ Linchpin တဈယောကျဖွဈလာစဖေို့အတှကျ အရေးပါပွီး သိသငျ့တဲ့အကွောငျးအရာတဈခြို့ကို ကောကျနှုတျပွီး အခုအပိုငျး (၂) မှာ ပွုစုတငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ။ အဆငျသငျ့ဖွဈပွီဆိုရငျ ဆကျလကျဖတျရှုလိုကျကွစို့ဗြာ။
ဒါတှကေတော့ Seth Godin ရဲ့ Linchpin ထဲက အဓိက ကောကျနုတျခကျြတခြို့ဖွဈပါတယျ။
စကျမှုတျောလှနျရေးခတျေ မတိုငျမီက ပါရမီရငျ့သနျတဲ့ ကြှမျးကငျြသူတှဟော အရာမြားစှာကို ပွုလုပျခဲ့ကွတယျ။ လကျရာက သူမတူအောငျ ထူးခွားလလေေ တနျဖိုးကွီးမားလဖွေဈပါတယျ။
စကျမှုတျောလှနျရေးကွောငျ့ အမြိုးအစားတူထုတျကုနျတှကေို မွနျမွနျဆနျဆနျနဲ့ ဈေးသကျသကျသာသာ ထုတျလုပျနိုငျခဲ့တယျ။
စကျရုံတှကေ အလုပျသမားတှကေို ကမျလှမျးခကျြတဈခု ပေးခဲ့တယျ – သူတို့ရဲ့ ကြှမျးကငျြတဲ့ လုပျဆောငျရညျတှနေဲ့ စိတျကူးစိတျသနျးတှကေို လောကျငှပွလေညျစလေောကျမယျ့ ပုံမှနျလုပျခငှနေဲ့ လဲလှယျဖို့ဖွဈပါတယျ။ စာသငျကြောငျးတှနေဲ့ ကျောပိုရေးရှငျးတှကေတော့ အမြားနဲ့မတူဘဲ တဈမူထူးနမေယျ့အစား အမြားသူငါလိုဖွဈဖို့အတှကျပဲ ဗဟိုပွုခဲ့ကွတယျ။ အမြိုးအစားတူတဲ့ ထုတျကုနျတှကေို ဈေးပေါပေါနဲ့ ခပျမွနျမွနျ ထုတျလုပျနတေဲ့ စကျရုံတှမှော အမြိုးအစားတူရာလူတှကေို အလှယျတကူ အစားထိုးနိုငျတဲ့ ခှေးသှားစိပျတှအေဖွဈ လိုအပျခဲ့ကွတယျ။
အဲဒီလိုလုပျဆောငျမှုဟာ အခြိနျတိုတိုအတှငျးမှာ အကြိုးဖွဈထှနျးခွငျးနဲ့ ထုတျကုနျစှမျးအားရဲ့ အမွငျ့ဆုံးကာလကို ရောကျခဲ့တဲ့ လှနျခဲ့တဲ့နှဈအနညျးငယျကအထိတော့ ကောငျးကောငျးအလုပျဖွဈခဲ့ပါတယျ။ ဒီနောကျမှာတော့ ဈေးသကျသာတဲ့ ထုတျကုနျတှကေို တရကွမျးထုတျလုပျနမှေုက အလုပျမဖွဈတော့ပါဘူး။ ဒီလိုနဲ့ပဲ အလုပျသမားတှနေဲ့ အပေးအယူက ပွိုပကျြသှားပါတော့တယျ။
အခုဆိုရငျ စီးပှားရေးစနဈက စနဈကွီးကိုယျတိုငျ ပွနျတီထှငျရပါတော့မယျ (အလုပျသမားတှလေညျး အပါအဝငျပေါ့)။ ရှကေို့တကျလှမျးတဲ့အခါမှာ အောငျမွငျတဲ့သူတှကေ “Linchpin”တှေ . . . အမြားသူငါလိုမဟုတျဘဲ ထူးခွားနတေဲ့သူတှေ ဖွဈလာမှာ ဖွဈပါတယျ။
ဆီးနှငျးပှငျ့ တဈပှငျ့နဲ့တဈပှငျ့ မတူကွသလိုပဲ လူနှဈယောကျဟာလညျး မတူနိုငျကွပါဘူး။ လူတဈယောကျခငျြးစီမှာ ကိုယျစီကိုယျငှ ကြှမျးကြှမျးကငျြကငျြလုပျနိုငျတဲ့ အရာတှရှေိပါတယျ။ အဲဒီအရာတှဟော ကြှနျတျောတို့ရဲ့ “ပါရမီ”ပါပဲ။
ကြှနျတျောတို့ရဲ့ ပါရမီနဲ့ အကောငျးဆုံးလုပျနိုငျတဲ့ အရာကတော့ ပေးကမျးပဈဖို့ပါပဲ။ ပွနျလညျရယူလိုတဲ့ မြှျောလငျ့ခကျြမပါဘဲနဲ့ လကျဆောငျပေးကွတဲ့အခါမှာ လူလူခငျြး ဆကျသှယျမှုနဲ့ ပတျသကျဆကျဆံမှုတှကေို ဖနျတီးပေးပါတယျ။
Linchpin တှဟော သူတို့ရဲ့ တမူထူးခွားတဲ့ အားသာခကျြတှကေို အမွငျ့မားဆုံးမှာ ထားရှိနိုငျရုံမကဘဲ လူလူခငျြး ဆကျသှယျမှုကိုလညျး ဖနျတီးနိုငျစှမျးရှိသူတှေ ဖွဈကွပါတယျ။ သူတို့တှဟော စိတျကူးစိတျသနျးတဈခုကို အစပြိုးတတျကွသလို အလုပျကွိုးစားပွီး သူတို့ရဲ့အဖှဲ့အစညျး သို့မဟုတျ သူတို့ရဲ့ ကိုယျပိုငျလုပျငနျးမှာ မရှိမဖွဈတဲ့သူတှဖွေဈလာအောငျ လုပျနိုငျကွပါတယျ။
ကြှနျတျောတို့ရဲ့ခေါငျးမှာ အကွမျးသုံးအပိုငျးတဈခုရှိပါတယျ။ အဲဒါကို ဂျေါဒငျ က ဖှတျဦးနှောကျလို့ ချေါပါတယျ။ အဲဒီအပိုငျးဟာ ကြှနျတျောတို့ အသကျရှငျသနျဖို့ ပကတိအသိဉာဏျနဲ့ အဓိကအားဖွငျ့ အကွောကျတရားကတဆငျ့ ကြှနျတျောတို့ကို အသကျရှငျသနျနစေတေယျ။ ဖှတျဦးနှောကျဟာ ကြှနျတျောတို့စိတျရဲ့ ပိုမိုကောငျးမှနျတဲ့အပိုငျးတှထေကျ မရှိမဖွဈလိုအပျခကျြတဈခုအဖွဈ အခရာပိုကနြပေါတယျ။
ကြှနျတျောတို့ရဲ့ပါရမီကို ကွားမွငျနိုငျဖို့အတှကျ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ ဖှတျဦးနှောကျက ပို့လှတျလိုကျတဲ့ အကွောကျတရားတှကေို ဥပက်ေခာပွုတတျဖို့လိုပါတယျ။ ဒါဟာ စကျမှုတျောလှနျရေးအလှနျ စီးပှားရေးစနဈမှာ ကြှနျတျောတို့ကို အဖိုးတနျစတေဲ့ အရာပါပဲ။
အတိုခြုံးပွောရရငျ Linchpin ဟာ ကြှနျတျောတို့ကို အုတျရောရောကြောကျရောရော ဖွဈမနဘေဲ အမြားကွားက ထိုးထှကျနဖေို့အတှကျ အားပေးထားပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ဟာ သူမတူဘဲ ထူးခွားနဖေို့ ကိုယျ့ရဲ့အားသာခကျြတှကေို အသုံးပွုရမှာဖွဈတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ အမြားနဲ့မတူဘဲ ထူးခွားတဲ့လုပျသားဝနျထမျးတဈယောကျကို စီးပှားရေးအကပျြအတညျးဆိုကျခြိနျတှမှောတောငျ အလှယျတကူ အစားထိုးမရနိုငျလို့ပါပဲ။
Linchpin တဈယောကျအဖွဈ ပွောငျးလဲလိုသူမြားအတှကျ အိုငျဒီယာကောငျး ငါးခု
၁. ကိုယျ့အတှကျ ဘာပွနျရမလဲဆိုတာ မမေးဘဲ ဘဝတှကေို ပွောငျးလဲပေးမယျ့ လကျဆောငျတှကေို ပေးဝပေါ။
၂. ထုတျလုပျမှုစှမျးအားနဲ့ ရကျရောမှုက ဈေးကှကျတှကေို ပိုမိုကွီးမားစပွေီး အခြိနျတိုတိုနဲ့ ပိုအကြိုးဖွဈထှနျးစတေယျ။
၃. အကနျ့အသတျတှမေရှိတဲ့ အောငျမွငျမှုတှကေို ရှာဖှပေါ။
၄. ကွောကျစိတျကိုခံစားပွီး ကြျောလှားလုပျဆောငျပါ။
၅. ခွောကျပွဈကငျးသဲလဲစငျဆိုတာ အမှမျးတငျလှနျနတေဲ့အရာပါ။ ပွညျ့စုံမှုဆိုတာ တကယျမရှိတဲ့အကွောငျးကို Benjamin Franklin က ရှာဖှတှေရှေိ့ခဲ့ပွီးပွီ။
လူတှဟော စှနျ့စှနျ့စားစားမရှိဘဲ အမြားနဲ့ လိုကျလြောညီထှေ နတေတျကွတာကွောငျ့ ကြှနျတျောတို့ဟာ သူလိုကိုယျလိုပဲ တိရစ်ဆာနျအုပျတဈအုပျရဲ့ စိတျသဘောထားမြိုးနဲ့ နထေိုငျနကွေပါတယျ။
Linchpin ထဲမှာ ဆကျဂျေါဒငျဟာ အနုပညာသညျတှဆေိုတဲ့ အသုံးအနှုနျးကို သုံးစှဲထားပမေယျ့ အနုပညာသညျဆိုတာဟာ သူတို့ရဲ့အရငျးခံပါရမီတှနေဲ့ လူတှကေို ပွောငျးလဲပေးတဲ့သူလို့ ဆိုလိုရငျးဖွဈပါတယျ။
လူအမြားစုဟာ အမြားကွားထဲကနေ ထိုးထှကျမနခေငျြတဲ့အတှကျကွောငျ့ ဒီစာစောငျကိုဖတျတဲ့အခါမှာ လူအတျောမြားမြားကို စိတျမသကျမသာ ဖွဈစပေါလိမျ့မယျ။ ဘာကွောငျ့လဲ? ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ အဲဒီလိုဖွဈဖို့အတှကျ အငျမတနျကွိုးစားရပွီး အငျမတနျအားစိုကျထုတျရလို့ပါပဲ။ လူတျောတျောမြားမြားက ကိုယျဘာလုပျရမယျဆိုတာကို အမွဲတမျး ပွောဆိုခွငျးခံလာရတဲ့အတှကျ သူတို့တှအေတှကျ သကျသောငျ့သကျသာရှိတဲ့ အခွအေနမှောပဲ တှယျကပျနလေိုကွပွီး လုပျသငျ့တာကို မလုပျကွပါဘူး။
ဟိုအရငျတုနျးကတော့ လူတှဟော ခိုငျးသမြှကို ရိုရိုကြိုးကြိုးနဲ့လုပျပွီး အလုပျကို အခြိနျမှနျရောကျမယျ၊ အလုပျကွိုးစားမယျ၊ ပွဿနာမရှာဘူးဆိုရငျ သူတို့ရဲ့အလုပျမှာ အောငျမွငျသှားကွပါလိမျ့မယျ။ ဒါပမေဲ့ အဲဒီခတျေကွီးက ကုနျခဲ့ပါပွီ။ ဒီနခေ့တျေမှာ အောငျမွငျဖို့ဆိုရငျတော့ အမြားထကျထူးခွားပွီး ရကျရောဖို့၊ အရေးကွီးတဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြတှေ ခတြတျဖို့၊ အနုပညာကို ဖနျတီးတတျပွီး လူတှနေဲ့ အနုပညာကို ခြိတျဆကျပေးတတျဖို့ လိုအပျလာပါပွီ။ ဒါတှဟော ကမ်ဘာ့ဈေးကှကျကွီးက ခမြှတျပေးလိုကျတဲ့ အရာတှပေါပဲ။ လူတှအေနနေဲ့ လုပျစရာရှိတာတှကေို ဦးစီးဦးဆောငျပွုပွီး ဆောငျရှကျမှဖွဈတော့မယျ့ ခတျေပါ။ အနုပညာသညျတဈယောကျအနနေဲ့ အနုပညာလကျရာ မြားမြားပွုလုပျလေ ပိုမိုလကျရညျတကျလာလပေါပဲ။
ဒီတော့ Linchpin တဈယောကျဖွဈလာအောငျ ဘယျလိုလုပျရမလဲ?
အဲဒီအတှကျ ရှငျးလငျးတဲ့လမျးကွောငျး မရှိပါဘူး။ ဘယျသူကမှ မှေးရာပါ Linchpin မဟုတျပါဘူး။ Linchpin တဈယောကျဖွဈဖို့အတှကျ သငျ့အနနေဲ့ အရငျဆုံးဖွတျရမှာဖွဈပွီး အဲဒီနောကျမှ ဖွညျးဖွညျးခငျြး လုပျယူရမှာဖွဈပါတယျ။
၁. အဖှဲ့အစညျးရှိ ဝနျထမျးမြားကွားတှငျ ထူးခွားသညျ့ဘုံနယျပယျတဈခု စီစဉျပွုလုပျခွငျး။
၂. သူမတူဘဲထူးခွားသညျ့ ဖနျတီးမှုစှမျးရညျ အသုံးပွုခွငျး။
၃. ရှုပျထှေးနကျနဲသညျ့ အခွအေနတေဈခု သို့မဟုတျ အဖှဲ့အစညျးတဈခုကို စီမံခနျ့ခှဲခွငျး။
၄. Customer မြားကို ဦးဆောငျခွငျး။
၅. ဝနျထမျးမြားကို စိတျအားထကျသနျမှုဖွဈစခွေငျး။
၆. သကျဆိုငျရာနယျပယျအကွောငျး ဂဃနဏ သိရှိမှုရှိခွငျး။
၇. အမြားနှငျ့မတူ ထူးခွားသညျ့စှမျးရညျ ပိုငျဆိုငျခွငျး။
နှိမျ့ခမြှုရှိတဲ့ စိတျနစေိတျထားက ပွဿနာတဈခုကို မောကျမာမှုနဲ့မဟုတျဘဲ ညငျသာမှုနဲ့ ခဉျြးကပျနိုငျစပေါတယျ။
Linchpin တဈယောကျဖွဈလိုတယျဆိုရငျ စတငျလို့ကောငျးတဲ့နရောကတော့ အောကျကမေးခှနျးငါးခုကို အမှနျအတိုငျးဖွဆေိုပွီး လကျတှလေု့ပျဖို့ပါပဲ။
ပထမအကွိမျမှာတော့ အောငျမွငျခငျြမှ အောငျမွငျပါလိမျ့မယျ။ စကားဝိုငျးက ဖွဈခငျြမှဖွဈလိမျ့မယျ။ ထုတျကုနျက ရောငျးရခငျြမှ ရောငျးရလိမျ့မယျ။ သငျ့အလုပျရှငျက ကနြေပျခငျြမှ ကနြေပျလိမျ့မယျ။ သငျ့ရဲ့အနုပညာကို လူတှမေခံစားမိကွဘူး။ ဒါမြိုးတှဖွေဈတဲ့အခါမှာ အကောငျးဆုံးလုပျဆောငျနိုငျတာကတော့ အနုပညာမြားမြား ပိုဖနျတီးပွီး လကျဆောငျမြားမြား ပိုပေးဖို့ပါပဲ။ သငျခနျးစာယူပွီး ရှဆေ့ကျပါ။
အနုပညာသညျတဈယောကျအဖွဈနဲ့ ပွညျ့ပွညျ့ဝဝ ရှငျသနျနိုငျအောငျကွိုးစားပွီး ပုနျးအောငျးနတေဲ့ အရညျအသှေးတှေ ပျေါထှကျလာအောငျ ပွုလုပျပါ။ ဘဝကို နောငျတကငျးမဲ့စှာ နထေိုငျပါဆိုတဲ့ ဆကျဂျေါဒငျရဲ့သိမှတျဖှယျရာရေးသားခကျြကို အနှဈခြူပျပွီး ပထမပိုငျးနဲ့ ဒုတိယပိုငျးအဖွဈ တငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ။ Linchpin တဈယောကျဖွဈခငျြတယျဆိုရငျတော့ ဒီနကေ့စပွီး မိမိကိုယျကိုနဲ့ ကိုယျ့ရဲ့ပတျဝနျးကငျြကို စတငျပွောငျးလဲပါလို့ ပွောကွားရငျး ဆောငျးပါးကို အဆုံးသတျလိုကျရပါတယျ။